Vaovao - Dingana fanontana fanontana
Shirts & tampon
Pataloha & kilaoty
Dingana fanontana amin'ny laoniny
Inona ny fizotran'ny fanontana sublimation
Ny fanontana famoahana sublimation dia mampiasa pirinty voalohany hanontana pirinty fanontana manokana amin'ny taratasy famindrana, ary avy eo manafana sy milina hamindrana ireo loko amin'ny lamba. Raha ny tena izy, dia mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny loko manaparitaka, misafidy loko manaparitaka miaraka amin'ny mari-pana hafanana 180 ~ 240 ℃, ary afangaro amin'ny slurry mba hanaovana loko mangirana. Araka ny lamina sy ny lamina samihafa, Ep ~ J, Ny ranomainty miloko dia vita pirinty amin'ny taratasy famindrana, ny lamina sy ny lamina vita pirinty pirinty dia mifandray akaiky amin'ny lamba, ary ny loko dia nafindra avy amin'ny taratasy fanontana ho an'ny lamba aorian'ny fanodinana amin'ny milina fanontana famindrana amin'ny 200 ~ 230 ℃ mandritra ny 10 ~ 30s. Aorian'ny famafazana dia miditra ao afovoan'ny lamba izy mba hahatratrarana ny tanjon'ny fandokoana. Amin'ny fizotry ny fanafanana sy ny sublimation, mba ahafahan'ny loko mandehandeha any amin'ny lalana, dia matetika no atsofoka eo amin'ny ilany ambanin'ny faran'ny fitaovana miloko mba hahitana ny fanaparitahana sy hamindrana ny loko ary hanatsara ny kalitaon'ny famindrana.
Tombontsoa amin'ny fizotry ny fanamoriana T-shirt: effets fanontana tsara
Rehefa somary henjana ny fepetra takiana amin'ny fanaingoana T-shirt, safidy tsara ny fizotry ny fandokoana ny loko. Ny lamba navoakan'ny teknolojia famindran-doko sublimation dia manana lamina tsara, loko marevaka, sosona manankarena sy mazava, haingo kanto ary fahatsapana mahery vaika telo. Sarotra ny manonta amin'ny fomba ankapobeny, ary afaka manonta ny fomba fanaovana sary sy sary hosodoko.
Tombontsoa amin'ny fizotry ny fanamoriana T-shirt: ny vokatra vita pirinty dia mahatsapa malefaka ary manana androm-piainana lava.
Ny endrika lehibe indrindra amin'ny famindrana ny fandokoana ny loko dia ny fandokoana afaka miova ho polyester na fibre, ary ny vokatra vita pirinty mahatsapa tena malefaka sy mahazo aina, ary amin'ny ankapobeny tsy misy sosona ink. Ankoatr'izay, satria efa maina ny ranomainty mandritra ny fizotry ny famindrana, ny ain'ny sary dia lava amin'ny fianan'ny fitafiana ihany, ary tsy hisy ny haingo sy ny ranomason'ny sary pirinty, izay hisy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny lamba .
Fotoana fandefasana: Oktobra-09-2020
Hot Fashion Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2003 dia orinasa isan-karazany izay mampifangaro ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny famokarana amin'ny asa fanondranana sy e-varotra. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny tanànan'i Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina miaraka amina tranokala misy rohy fitaterana. Izy io dia manana metaly toradroa 8250 metatra toradroa sy mpiasa 300. Hot Fashion dia malaza amin'ny sehatry ny akanjo fanatanjahan-tena any Shina. Ary ankehitriny ny vokatra vokariny dia nametraka tamim-pahombiazana ny tsena tany Etazonia, Etazonia, Japon, Brezila ary ny Vondrona Eoropeana.
Hot Fashion Co.Ltd. natsangana tamin'ny taona 2003, izay orinasa isan-karazany izay mampifangaro ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny famokarana, ny asa fanondranana, ny varotra ary ny asa. Ny orinasa miorina ao amin'ny tanànan'i Nanchang miaraka amina fitaterana mety. Izy io dia manana metaly toradroa 8250 metatra toradroa sy mpiasa 300.